အရင်းအမြစ် - အပြည့်အဝကိုဘယ်လိုမှအားလုံးကို Android နှင့် iOS အသုံးပြုသူများအဘို့လမ်းညွှန်
iPhone ကို 8
iOS က 10.3
iPhone ကို 7
အန်းဒရွိုက် Backup ကို
iOS အတွက် 10
အန်းဒရွိုက် Recovery ကို
iPhone ကို Recovery ကို
DFU Mode ကို
iPhone ကို Reset
iPhone ကို Frozen
iPhone ကို Backup ကို
iPhone ကို Restore
Android ပေါ်မှာ Cache Partition ခွဲ Wipe ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ကျနော်တို့ကို Android နှင့်အတူ related အပေါငျးတို့သညျအခွားအသေးစိတ်ကိုအပေါ် cache ကို partition ကိုသုတ်ဖို့ဘယ်လိုဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်။ နောက်ထပ် Read >>
Posted by ကို Selena Lee က | 05.05.2017
Android ပေါ်မှာ App ကိုဒေတာနှင့်ကက်ရှ်ရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့ cached data နဲ့တစ်ဦးမှာ Android စမတ်ဖုန်းအတွက်သိမ်းထားသောဒေတာရှင်းလင်းရေး၏နည်းလမ်းများအားဖြင့်ဆိုလိုသောအရာကိုအပေါ်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Read >>
SNAP Save ဖို့ Snapbox နှင့်၎င်း၏အကောင်းဆုံးအစားထိုးစရာအသုံးပြုနည်းဘယ်လိုနေသလဲ?
ယနေ့ကြှနျုပျတို့ Snapbox နှင့်မည်သို့ SNAP ချွေတာဘို့အသုံးပြုအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်း Snapbox နေရာမှာသုံးနိုငျသောအကောင်းဆုံးအစားထိုးအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Read >>
SNAP Save ဖို့ SnapSave နှင့်၎င်း၏အကောင်းဆုံးအစားထိုးစရာအသုံးပြုနည်းဘယ်လိုနေသလဲ?
ယနေ့တွင်ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ကျနော်တို့ SnapSave နှင့်အတူ Snapchat ကယ်တင်နှင့်လည်း iOS နှင့် Android မှာနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ SnapSave တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖို့ဘယ်လိုဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်။ နောက်ထပ် Read >>
ဟန်းမပါဘဲ Snapchat အပေါ်ဗီဒီယိုများအသံဖမ်းမှဘယ်လိုနေသလဲ?
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့က iOS နှင့် Android နှစ်မျိုးလုံးအပေါ်မှာလက်မပါဘဲ Snapchat အပေါ်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် Read >>
နောက်ပိုင်းတွင်ဘို့တစ်စုံတစ်ဦးကဖွင့် Snapchat ပုံပြင်များ Save ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်ကိုယ် Snapchat ပုံပြင်များနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုမှုအတွက်အခြားသူများကိုသူတို့ကယ်ဖို့အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Read >>
SNAP Save ဖို့ Casper နှင့်၎င်း၏အကောင်းဆုံးအစားထိုးစရာအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Snapchat များအတွက် Casper နှင့်အတူ Snapchat ပုံနဲ့ပုံပြင်များကိုကယ်တင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ ဤအချက်အလက်ပို့စ်တွင်, ငါတို့သည်လည်း Casper ဒင်္ဂမှလုံခြုံတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ် Read >>
SNAP Save ဖို့ Snapcrack နှင့်၎င်း၏အကောင်းဆုံးအစားထိုးစရာအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Android အတွက် Snapcrack သုံးပြီးသင့်ရဲ့ Snapchat ပုံပြင်များနှင့်ဓါတ်ပုံတွေကို save လုပ်ပါ။ ကျနော်တို့ Snapcrack အန်းဒရွိုက်နှင့်၎င်း၏အကောင်းဆုံးအစားထိုးများအတွက် stepwise သင်ခန်းစာအတူတက်လာကြပြီ။ နောက်ထပ် Read >>
iPhone / iPad ပေါ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဒေတာများကိုဖျက်ပစ်ရန်သုံးခုနည်းလမ်းများ
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့ iPhone, iPad ပေါ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အချက်အလက်မဖျက်ပစ်ဘို့အကြောင်းကိုသုံးခုကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Read >>
Posted by ကို Selena Lee က | 04.05.2017
သင်၏အဟောငျးကို iPhone ရောင်းချခြင်းမပြုမီအဘယ်သို့ပြုသနည်း
ဤအချက်အလက်ဆောင်းပါးထဲမှာက iPhone ရောင်းချမတိုင်မီဘာလုပ်ရမှန်းလေ့လာပါ။ အကြှနျုပျတို့သညျကို iPhone ရောင်းချမတိုင်မီအတိုင်းလိုက်နာသင့်သည့် In-depth ကိုသင်ခန်းစာအတူတက်လာကြပြီ။ နောက်ထပ် Read >>
Safely LG က G4 Stylus Root နှင့်လျင်မြန်စွာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? (မျိုးစုံကိုမော်ဒယ်များ)
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးစလုံးလုံခြုံစွာနှင့်လျင်မြန်စွာ, LG က G4 Stylus root ဖို့ဘယ်လိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ နောက်ထပ် Read >>
Posted by ကို Selena Lee က | 02.05.2017
ထိပ်တန်း7ကို iPhone သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းထိရောက်စွာ iPhone ကိုရှင်းလင်း
ဤအအံ့သြဖွယ် iPhone ကိုသန့်စင်ရေးကိရိယာများနှင့်အတူသင်အလွယ်တကူမျှအချိန်အတွင်းက iPhone ရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုအပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု. မဆိုဒုက္ခမရှိဘဲသန့်ရှင်းတဲ့ iPhone ကို။ နောက်ထပ် Read >>
အလွယ်တကူက iPhone / iPad ပေါ်တွင်အခြားအချက်အလက်ဖျက်ပစ်ပါမှဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒီကျယ်ပြန့်သင်ခန်းစာအတွက် iPhone ပေါ်မှာအခြားအကိုဖျက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့သင့်ရဲ့ device ပိုကောင်းအောင် iPhone ကိုအခြားဒေတာများကို delete ကိုကူညီကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေစာရင်းပါပြီ။ နောက်ထပ် Read >>
iPhone / iPad ပေါ်တွင် Bookmarks ကိုဖျက်ပစ်ရန်နှစ်ဖြေရှင်းနည်းများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ stepwise သင်ခန်းစာအတွက် iPad နဲ့ iPhone ပေါ်မှာ bookmarks ကိုဖျက်ပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာပါ။ ကျနော်တို့ဘယ်လို iPhone ပေါ်မှာ bookmarks ကိုစုစည်းပြီးစနစ်တကျနေထိုင်ရန်သင့်အားသွန်သင်မည်။ နောက်ထပ် Read >>
ဒါဟာ / ခိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရဲ့ဘယ်အချိန်မှာအဝေးမှ iPhone ကို Wipe ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဤဆောင်းပါးတွင်တှငျကြှနျုပျတို့ကိုအဝေးမှကံမကောင်းလျှင်, ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးယူနေသည်ဖြစ်စေ၎င်း၏စက်ရုံတွင် settings ကိုမှတစ်ဦးသည် iPhone သုတ်နှင့် reset ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် Read >>
prev 1234567 8910 Next ကို